साबधान रहनुहोस ! मुख गोरो र चम्किलो पार्न भन्दै प्रयोग गरिएको औषधिले झ्याप्झ्याप्ती रौं उम्रिए ! – Dailny NpNews
शनिबार १४ जेठ २०७९
भारतमा नेपाली दम्पत्तीको दुःखद निधन, दुई नाबालक छोरा टुहुरा भए
अमेरिकाको स्कुल गोलीकाण्डमा मारिएकी शिक्षिकाकी छोरीले लेखिन् दुनियाँ स्तव्ध बनाउँने शब्द
हिजोबाट सिनेमा हलमा लागेको नेपाली चलचित्र ‘कबड्डी ४’अनलाइनमा लिक
‘सुर्यकुमारी’ भन्दै तथानाम लेखेपछि करिश्माले फेसबुकबाटै दिइन् यस्तो चेतावनी (स्टाटस सहित)
कति महान् बिचार बालेनकी श्रीमतीको ,चौत`र्फी प्रशंसा बटुल्ने गरि बालेनका लागी लेखिन् यस्तो स्टा’टस !
चर्चित मोडलको अश्लिल भिडियो हात पारेर ७ करोडको बार्गेनिङ गरेपछि…
साबधान रहनुहोस ! मुख गोरो र चम्किलो पार्न भन्दै प्रयोग गरिएको औषधिले झ्याप्झ्याप्ती रौं उम्रिए !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८ समय: ११:२७:०८
अस्पतालका डाक्टरलाई धेरैले भगवान जस्तै मान्छन । तर कतिपय अवस्थामा तिनै डाक्टरहरु श’त्रु स’र’ह हुन्छन । अर्थात उपचारमा खटिएका डाक्टरले रोगको सहि पहिचान गरि उपचार गर्दा विरामी निको हुन्छन भने एउटा सानो गल्तीले विरामीको ज्या’नै जा’न स’क्छ ।
स्पेनमा पनि डाक्टरको एउटा ग’ल्तीले अ’नौ’ठो समस्या निम्तिएको छ । बालबालिकाहरुलाई पेट दुखाईको समस्या निदानका लागि डाक्टरले दिएको औषधि खाँदा अर्कै परिणाम देखियो । उत्तरी स्पेनको क्या’न्ट’ब्रिया क्षेत्रको टोरेला, गेभा शहरका २० जना बालबालिकाहरुमा पे’ट दु’ख्ने र ग्याँ’स उत्प’न्न हुने रोग निको पार्न भन्दै डाक्टरले औषधि दिए ।
औषधि खाएपछि ति बालबालिकाहरको शरीरमा अत्यधिक मात्रा कपालका जस्तै रौंहरु उम्रिए ।
स्थानीय प्रशासनका अनुसार पे’ट दु’खा’इको समस्या लिएर आएका बालबालिकहरुलाई ओमेप्राजोल नामक औषधि दिनुपर्नेमा मिनोजिडिल भन्ने औषधि दिइएको थियो । गलत औषधिका कारण बालबालिकाहरुको शरीरमा अनावश्यक रौं, हरु उम्रिएका हुन । शरीरमा अनावश्यक रुपमा रौं उम्रिने रोगलाई हा’इ’परट्रि, चोसिस भनिन्छ । डेलिमेलमा प्रकाशित समाचार अनुसार मि’नो’जिडिल नामक औषधि कपाल बढाउनका लागि प्रयोग गरिने औषधि हो ।
गलत औषधिको प्रयोगका कारण शरीरभरि अत्यधिक मात्रामा रौं उ’म्रि’एका २० जना बालबालिकाहरुका अभिभावकले औषधि सिफारिस गर्ने डाक्टर र औषधि पसल’विरु’द्ध क्षतिपुर्तीको मागसहित मु, द्धा दायर गरेका छन । मिनोजिडिल सिरपको बोत्तलमा ओमेप्रा, जोलको लेबल टाँ’सेर ग्रा’ना’डा, केन्टाब्रिया र भेलेन्सिया शहरका औषधि पसलहरुमा वितरण गरिएको छानविनका क्रममा खु’ला’सा भएको छ । यो घटनाप्रति स्थानीय प्रशासनले गल्ती महसुस गर्दै पीडित बालबालिकहरुको उपचार शुरु गरेको छ ।
११९ पटक हेरिएको
यो पढेपछि शायद ओछ्यानमा सुत्न छोड्नुहुनेछ
यी दुई एकान्तमा कुरा गर्दैथिए, तर एकैछिनमा उनीहरूले जे गरे..(भिडियो सहित)
महिलाको स्त’न समातेर भविष्य हेर्ने अचम्मका ज्योतिष, भविष्य हेर्न महिलाको घण्टौं लाईन (भिडियो सहित)
शरीरका यी ६ ‘अंग’ ठूला हुने महिला छोड्दै नछोड्नु ! हेर्नुहाेस् पूरा जानकारी…..